विश्वकप फुटबल : उद्घाटन खेलमा आयोजक रुसको शानदार जित, साउदी ५–० ले पराजित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वकप फुटबल : उद्घाटन खेलमा आयोजक रुसको शानदार जित, साउदी ५–० ले पराजित
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महासंग्राम रुस विश्वकप २०१८ को उद्घाटन खेलमा आयोजक रुसले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ । बिहिबार राति सम्पन्न खेलमा रुसले साउदी अरेबीयामाथि ५–० को शानदार जित हात पारेको हो ।
रुसले उद्घाटन खेल जितेसँगै ८८ वर्षयताको इतिहासपनि जोगाएको छ । सन् १९३० देखि सुरभएको विश्वकप फुटबलमा अहिलेसम्म आयोजक टोली उद्घाटन खेलमा कहिल्यै हारेको छैन् ।
जितसँगै आयोजक रुस ३ अंक जोड्दै समुह एको शिर्ष उक्लिएको छ । ५–० को लज्जास्पद हार व्यहोरेकोसाउदी अरेबीयाभने अंक विहिन छ । रुस र साउदीसँगै, उरुग्वे र इजिप्टपनि समुह एमा समावेश छन् । प्रत्येक टोलीका शिर्ष दुई टोली अंक तालिकाका आधारमा नकआउट चरण प्रवेश गर्नेछन् ।
रुसको उत्कृष्ट प्रदर्शन, साउदी निरिह
पहिलो हाफ २–० गोलको अग्रता लिएको खेलमा दोस्रो हाफमापनि रुसलेनै ३ गोल थप्यो । साउदी अरेबीया भने गोल रहित निरिह बन्न पुग्यो । रुसले खेलको १२ औं मिनेटमा लरी गाजन्सकीको हेडर गोलबाट सुरुवाती अग्रता लिएको थियो ।
अलेकसेन्डर गोलोभिनका पासमा उनले गोल गरेका थिए । दोस्रो गोल पनि पहिलो हाफमै भएको थियो । पहिलो हाफ सकिन २ मिनेटबाँकी छँदा डेनिस चेरिसेभले रोमन जोबनीनको पासमा दोस्रो गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि खेलको ७१ औं मिनेटमा आर्टेम ज्युबाले एक आकर्षक गोल गर्न सफल भए । ज्युबा ७० औं मिनेटमा बैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए । उनले मैदान पसको एकै मिनेटमा गोल गरे ।
पहिलो गोलका लागि पास दिने खेलाडी गोलोभिनले ज्युबालाई आकर्षक गोलका लागि पास दिएपछि रुसले ३–० को अग्रता लिएको थियो । रुसले अन्य दुवै गोल अतिरिक्त समयमा गरेको थियो ।
निर्धारित समय ९० मिनेटमा सकिएपछि खेलमा बाँकी ३ मिनेट थप गरिएको थियो । सोहि समयमा रुसी टोली २ गोल गर्न सफल भए । रुसका लागि दोस्रो गोल गरेका डेनिसलेनै चौथो गोल गरे ।
त्यसपछि खेलमा पाँचौ तथा अन्तिम गोल आकर्षक फ्रिकिक मार्फत भएको थियो । पहिलो गोल तथा तेस्रो गोलका लागि पास दिएका खेलाडी अलेकसेन्डर गोलोनिले खेल सकिन एक मिनेटमात्र बाँकी रहँदा फ्रिकिक मार्फत आकर्षक गोल गरेपछि खेल ५–० मा टुंगीएको थियो ।
बल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएपनि गोल गर्न नसक्नु साउदीको लागि दुर्भाग्य सावित भयो । साउदीले ६ पटक गोलको प्रयासगर्दै ६१ प्रतिशत बल आफ्नो पक्षमा परेको थियो । तर साउदीको कुनै गोल पोस्टो दिशामा गएन् ।
तर मात्र ३९ प्रतिशत बल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल रुसले खेलमा पुरा १४ पटक गोलको प्रयास गरेको थियो । ७ पटक बल पोस्टमाजाँदा ५ गोलले जाली चुम्न सक्यो । अब शुक्रबार समुह ए अन्तर्गतनै मोहम्मद सलाको इजिप्ट र लुइस स्वारेजको टोली पाराग्वे प्रतिस्पर्धामा उत्रदैछन् ।